Saturday, 10.19.2019, 12:53am (GMT+5.5) Home Contact
पृथ्वीनारायण शाहको योगदान नभुलौँ
Tuesday, 01.05.2016, 11:25am
काठमाडौं । आधुनिक नेपालका एकीकरणकर्ता बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीका दिन राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइने परम्परा मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि रोकियो ।
शिथिल भैसकेको मधेश आन्दोलन पुनः किन चर्किदै छ ?
Tuesday, 12.22.2015, 12:30pm
मुलुक अन्त्यहीन द्वन्द्वको चपेटामा
काठमाडौं । तराईमा प्रायोजित मधेश आन्दोलन फेरि चर्किन थालेको छ । भारत सरकारले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी आंशिक रुपमा खुले पनि वीरगञ्ज नाका खुल्ने कुनै लक्षण छैन । राजधानी लगायतका देशका विभिन्न भागमा इन्धन संकट यथावत छ । मधेश आन्दोलनले चार महिनाको नेटो काटिसक्यो यो कहाँ गएर कहिले कसरी टुंगिन्छ भन्ने अनुमान गर्नै गाह्रो छ । मधेश आन्दोलनसंग जोडिएर आएको सीमा अबरोध र भारतको अघोषित नाकाबन्दी पनि ‘अब चाँडै खुल्छ’ भन्दाभन्दै झनझन् लम्बिँदै गएको छ । भारतको बिहारमा भएको विधानसभाको चुनावलाई नाकाबन्दीसंग जोडेर हेर्ने र बिहारमा भाजपाको पराजयपछि नव गठित राज्य सरकारले नाकाबन्दी खोल्ने अडकलबाजी पनि हावादारी गफमै परिणत भयो ।
राष्ट्रपतिलाई त यस्तो ? सामान्य महिलालाई कस्तो ??
Tuesday, 12.22.2015, 12:29pm
नेपालमा तराई (मधेश)मा जति महिलामाथि हिंसा हुन्छ त्यति अन्यत्र हुँदैन । त्यहाँ महिलामाथिको हिंसा जान्ने, सुन्ने, बुझ्ने र समाजमा आफूलाई अग्रज ठान्नेहरूबाटै हुने गरेको कुरा राष्ट्रपति भण्डारीमाथिको अभिव्यक्तिले उजागर गरेको छ । राष्ट्रपतिमाथिको उनीहरूको आलोचना मधेशी महिलाहरूमाथिको दृष्टिकोण हो भन्ने आम बुझाई छ । एउटी महिला मुलुकको इतिहासमै पहिलापटक राष्ट्रपति बन्न सफल भण्डारीमाथिको अभिव्यक्ति र जानकी मन्दिरमा भएको बम प्रहार तथा उग्र नारावाजीले देशको बेइज्जत गरेको छ ।
पुरानो कानुनले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या
Tuesday, 12.22.2015, 12:28pm
काठमाडौं । ऐतिहासिक रुपमा संविधानसभाले असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा अनेक चुनौति कायम रहेको छ । बाह्य शक्तिहरूको चरम चासो रहेको संविधानलाई अनेक किसिमले विवादमा पार्ने र नेपालको अस्थिरता बढाउने प्रयास पनि भैरहेको छ ।
बाटो खुल्यो पुनःनिर्माणको
Tuesday, 12.22.2015, 12:14pm
काठमाडौं । भूकम्प गएको झण्डै आठ महिनापछि त्यसबाट पुगेको भौतिक क्षतिको पुनःनिर्माण गर्न गठन गरिने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको छ । संसदबाट पारित बिधेयकर्ला आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।
एकातिर नाकाबन्दी, अर्कोतिर बाँध
Tuesday, 12.15.2015, 12:14pm
मुलुकको राजनीतिक, प्रशासनिक र आम जनमानसको ध्यान नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनमा केन्द्रित भैरहेका बेला भारत भने सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाउने कार्यमा व्यस्त छ । मधेश आन्दोलन चलिरहेका बेला बाँकेमा सडकको नाममा बाँध बनाइरहेको भारतले पछिल्लो समय कञ्चनपुरको पुनर्वासको परासनस्थित नेपाल–भारत तीन मिटर अग्लो आली बनाउन सुरु गरेको छ ।
सरकारले खुट्टा कमायो : देशले तत्काल निकास नपाउने
काठमाडौं । नेपाली जनताका सामु थोपरिएको संकट तत्काल हट्ने सम्भावना क्षीण देखिएको छ । तराईमा चलेको ‘मधेश आन्दोलन’ शिथिल देखिएको र जनमानसमा व्यापक निराशा व्याप्त भएकाले सहभागिता कतै शून्य र कतै अति न्यून रहेको भए पनि मधेशी मोर्चा आफ्ना ११ बूँदे माग प्याकेजमै पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछोड्ने अडानमा छ । अघिल्लो हप्ता दिल्लीमा नेपाल र भारतका सरकारी प्रतिनिधिहरूबीच के के लेनदेन भयो र दिल्लीमा बोलाइएका मधेशी नेताहरूले के के आश्वासन र निर्देशन पाए भन्ने कुराको कुनै भेग नपाइए पनि भारत अघोषित नाकाबन्दीलाई हल्का पार्न सहमत भएको र मधेशी नेताहरू वार्तामा बस्न लचकदार बनेको संकेत सतहमा देखिएको हो ।
हिंसाले पाउने केही हैन
Tuesday, 12.15.2015, 12:13pm
काठमाडौं । मधेशवादी दलको आन्दोनका क्रममा चार दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । आन्दोलन यति हिंस्रक बनेको छ कि सुरक्षाकर्मीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई जिउँदै आगो लगाइएका छन् । तैपनि आन्दोलनले निष्कर्ष पाएको छैन । अरु कतिको ज्यान जाने हो ? यसको पनि लेखाजोखा छैन । आर्थिक क्षतिको त हिसाब किताब नै छैन । आन्दोलनले कुनै निष्कर्ष नदिने ठहर आन्दोलन र धर्नामा बसेकाहरूले निकाल्न थालेका छन् ।
देशमा अकल्पनीय संकटको अवस्था
तराईमा जारी ‘मधेश आन्दोलन’ र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले राष्ट्रिय संकटलाई अरू गहिरो पार्दैलगेको छ । तेल र ग्याँसको अभाव, व्यापक कालोबजारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्काे मूल्यवृद्धि र कतिपय अत्यावश्यकीय वस्तुको अभावले आमजनजीवनलाई झन्झन् सकसमा पार्दैलगेको छ । भारतको मानवता विरोधी नाकाबन्दी, निरन्तरको हस्तक्षेप र ‘मधेश आन्दोलन’को प्रायोजक र प्रवक्ताका रुपमा देखिएको सक्रियताको विरोधमा रहेका नेपाली जनताले ‘अभावमा जिउन तयार छौं तर भारतसंग घुँडा नटेक’ भन्दै अहिलेसम्म धैर्यताका साथ सरकारलाई साथ दिइरहेका छन् । तर, सरकारले भारतको नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खुट्टा कमाइरहेको, उपलब्ध इन्धनको वितरणमा पनि पारदर्शिता नअपनाएको, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको र इन्धनको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि चीनसंग एक महिना अगाडि भएको सैद्धान्तिक व्यापारिक सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि उचित पहल नगरेको र जनताको संयम र सहयोगलाई सामान्य रुपमा लिइरहेकोमा सरकारको अकर्मण्यप्रति आक्रोश बढ्न थालेको छ ।
आफ्नालाई विदेशीले गोली हान्दा पनि मौन
Tuesday, 12.01.2015, 03:02pm
मधेशी जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गरियो भन्दै तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको मधेश आदोलनको निकास के हो अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । संविधानले भेदभाव गरेको भन्दै आन्दोलनरत मधेशवादी दलका नेताहरू मधेशी जनताप्रति कति सम्वेदनशील छन् भन्ने खुलासा त अघिल्लो हप्ता सुनसरीमा एसएसबीले मच्चाएको गोलीकाण्डबाटै स्पष्ट भएको छ ।
कांग्रेसको अहिलेको बाटो र पाटो के हो ?
Tuesday, 12.01.2015, 03:00pm
काठमाडौं । संसदको सबभन्दा ठूलो दल, संविधान जारी गर्दा सरकारको नेतृत्व लिएको नेपाली कांग्रेसको भूमिका यतिबेला निराशाजनक छ । कांग्रेसले सहमतीय बाटो ताडेर मुलुकलाई गम्भीर संकटमा फसाएको आरोप लाग्ने गरे पनि उसले भने आफूले लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको भन्दै आएको छ । लोकतन्त्रको अभ्यासपछि कांग्रेस विपक्षी बनेको भए पनि मुलुका सम्वेदनशील विषयहरूमा पनि उसले खासै चासो दिएको छैन ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतामा कसैसँग झुकिंदैन
Tuesday, 12.01.2015, 02:30pm
काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताका विषयमा नेपाल कसैसँग नझुक्ने बताउनु भएको छ । गृहमन्त्री बस्नेतले आइतबार सुनसरी जिल्लाको इटहरीस्थित सशस्त्र प्रहरीको बराह बाहिनी मुख्यालय पकलीमा आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठीपछि स्थानीय सञ्चारर्मीसँगको कुराकानीमा सो कुरा बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा नै आँचआउने खतरा
Wednesday, 11.25.2015, 12:59pm
सरकारको गति सुस्त : दलहरूको गतिविधि शून्य
काठमाडौं । देशको अवस्था झन् झन् नाजुक हुँदैगएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीको विश्वव्यापी विरोध लहर चलेको भए पनि त्यसको कुनै असर देखिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हान र आग्रहलाई पनि भारतले बेवास्ता गरिरहेको छ । नयाँ संविधान जारी नहुँदै सुरू भएको मधेश आन्दोलनले एक सय दिनको नेटो काटिसक्यो– निकासको कुनै सम्भावना देखिएको छैन । तराईमा आन्दोलन अराजक, आक्रामक र हिंसात्मक बन्दैगएको छ । विरामी बोकेको एम्बुलेन्समा तोडफोड गर्ने, औषधि बोकेको गाडी जाउने, सुरक्षाकर्मीलाई घेराउ गरेर आक्रमण गर्ने, नेताहरूका घर तोडफोड गर्ने र जनतालाई आतंकित पारी जवर्जस्ती आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पार्ने जस्ता घटानाहरू बढ्दै गएकाले मधेश आन्दोलन मधेशी मोर्चाको नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको प्रष्ट भैरहेको छ ।
आन्दोलन आतंक किन बन्दैछ ?
Wednesday, 11.25.2015, 12:57pm
काठमाडौं । प्रदेशहरूको सिमांकनमा असन्तुष्टि जनाउँदै साँढे तीन महिनादेखि जारी मधेश आन्दोलन सुरुदेखि नै हिंसात्मक थियो । पछिल्ला केही समय त्यो आन्दोलन नाका धर्नामा सीमित भएपछि हिंसाका घटनामा कमी आए पनि छठ पर्व सकिएपछि आन्दोलन पुनः हिंसात्मक बन्न पुगेको छ । शान्तिपूर्ण र अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको भनिएको आन्दोलनमा सहभागीहरू आगजनी, बम बिस्फोट र गोली प्रहारको स्थितिमा पुग्नुले तराई (मधेश)को स्थिति अत्यन्त अराजक र आतंकित बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेस र एमाओवादीको मधेशमोहको निहितार्थ
Tuesday, 11.17.2015, 02:22pm
प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सिमांकनमा भएको सहमतिदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका मधेशवादीहरुलाई फकाउन नेपाली कांग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लागि पर्नुभएको छ । सरकारले पनि मधेशवादीलाई संवाद प्रक्रियामा अल्झाइरहन आइतबार नै दाहालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
भारतले तत्काल नाकाबन्दी हटाउने संकेत छैन
आपूर्ति प्रणालीमा भारतले खडा गरेको अवरोधले नेपालमा चरम मानवीय समस्या खडा गरेको छ । वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पले पारेको क्षतिभन्दा भारतले अवाञ्छित रुपमा गरेको नाकाबन्दीबाट मुलुकले ठूलो क्षति भोगिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत आइतवार देशवासीका नाममा पहिलोपटक गर्नुभएको सम्बोधनले तो तथ्यलाई राम्रोसंग उजागर गरेको छ । भारत निर्भरताको निर्मम पीडा मुलुकले भोगिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पन्न समस्याको जड र भावी कार्यदिशाबारे प्रष्ट धारणा राखे पनि तेल र ग्याँसको तत्काल आपूर्तिका लागि जनता विश्वस्त हुने गरी कुनै कार्य योजना प्रकाशमा आएको छैन । भारतले ‘युद्धको बेलामा समेत हुन नहुने अमानवीय व्यवहार’ गरेको र यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर परेको यथार्थचित्र प्रस्तुत गर्दै अघोषित नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गरी आपूर्ति सुचारू गर्न पनि उहाँले भारतसंग आग्रह गर्नुभएको छ ।
नाकाबन्दी गराएर हतियारको तस्करी
Tuesday, 11.17.2015, 02:21pm
भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपालमा इन्धन, औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति रोकेको भए पनि आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको साथ र सहयोगमा भारतबाट साना हतियार, लागू पदार्थ तथा इन्धनको कालोबजारी भैरहेको सुरक्षा निकायको दावी छ ।
विश्वभर आईएसको आतंक
Tuesday, 11.17.2015, 02:20pm
फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा शुक्रबार राति भएका शृङ्खलाबद्ध आतंकवादी हमला गर्दा त्यसमा परी १२८ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । त्यस्तै ३०० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । मुस्लिम उग्रवादीबिरुद्ध सिरिया, लिबिया र इराकमा अमेरिकी गठबन्धनमा रहेर हमला गरिरहेको फ्रान्समा भएको सो हमलाको जिम्मेवारी आईएसले लिइसकेको छ ।
भारतले ठूलो अपराध गरेको छ
Tuesday, 11.17.2015, 01:52pm
उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले नेपाल र नेपाली जनताले भारत र भारतीय सरकारको अहित हुने कुनै काम नगरेको अवस्थामा नाकाबन्दी गरेर अपराध गरेको बताउनुभएको छ ।
सरकार नढालेसम्म भारतले नाकाबन्दी नछोड्ने !
सत्ता गठबन्धन आत्मसमर्पण नगर्ने अडानमा
डेढ महिनादेखि भारतले लगाउँदैआएको अघोषित नाकाबन्दी तत्काल खुल्ने कुनै संकेत छैन । ‘मधेश आन्दोलन’ले पनि तीन महिनाको नेटो काट्न लागेको छ । संविधानसभा बहिष्कार गरेर हिँडेको आन्दोलनकारी मधेशी मोर्चा व्यवस्थापिका संसदमा फर्किको छ तर संसद चल्न नदिने अडानमा छ । भारतको सहयोगमा वीरगञ्ज सीमा नाकामा धर्ना जारी छ । सरकारले वार्ताका लागि समय तोकेर पहल गरे पनि वार्ता हुनसकेको छैन । अघिल्लो हप्ता दुबै पक्षले ‘सकारात्मक’ भनेको वार्ता वीरगञ्ज नाटकको मञ्चनपछि भाँडिएको छ ।
» अब घोषित रुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण
» काम नगरेका कि गर्न नदिएको ?
» चीनसंग थप नाका खोल्ने सहमति
» उत्तरतिरका सबै नाका खुलाउँछौं
» भारतको नियत अरु उदांगिदै
» डा. यादवको कार्यकाल स्मरणीय
» यस्तो अभ्यास अन्त कमै हुन्छ
» मुलुकले पायो महिला राष्ट्रप्रमुख, उपराष्ट्रपति जनजाति
» भारतीय एकाधिकार तोडियो
» हिमाल, पहाड तराईको एकता टुट्नु हुँदैन
» नाकाबन्दीबिरुद्ध राष्ट्रिय जागरणको नयाँ लहर
» भोलि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन
» मुलुकको अवस्था भयावह : भारतको तीब्रतम् चलखेल
» ठूलो मौका गुमायो नेपालले
» राष्ट्रिय सरकार नबने के हुन्छ ?
» सुन, पेट्रोल, फलाम सबै छ नेपालमा, तर अबरोध भारतकै
» भारतको नांगो खेलविरुद्ध नेपाली एकजूट
» ठ्याक्कै २०४५ सालमा जस्तै
» मधेशी नेताको हातमा छैन आन्दोलनको लगाम
» राष्ट्रसंघ पनि भारतकै बाटोमा ?
Page 10/32: « :: ...78910 11 12 13 ... :: »